Ukuphupha ngomtshato Discover ➡️ Discover Online ▷ ➡️
Nangona umtshato uthathwa njengesiganeko sothando, umtshato uchaza imeko eneziphumo zoqoqosho nezomthetho. Nabani na ongena kubudlelwane bomtshato nomnye umntu kwiofisi yobhaliso kwaye utshatile uthatha amalungelo athile kunye noxanduva, umzekelo, ukubonelelwa ngomnye umntu. Ukuba umtshato uqhawule umtshato, amabango esonyony angavela kwelinye lamaqabane.
Kwiinkcubeko ezininzi, ukutshata phakathi kwezihlobo ezisondeleyo akuvumelekanga. EJamani, umtshato unokuba nabantu ababini kuphela. Nangona kunjalo, kukho amanye amazwe apho isithembu, oko kukuthi, umtshato phakathi kwabantu abaliqela, uqhelekileyo.
Ukuba umntu uphupha ngokutshata, inokubonakalisa imeko yakhe yokwenyani, abaxakeke yiyo ngoku. Mhlawumbi ulwalamano lwexesha elide kwaye ufuna ukutshata esi sibini ngoku. Ukutolikwa kwamaphupha, ubudlelwane nobomi bokwenyani yinto ebalulekileyo.
Amaphupha ngomtshato anokwahluka kakhulu. Kula macandelo alandelayo uza kufunda ngakumbi malunga namaphupha aqhelekileyo kunye notoliko olwahlukileyo olunomdla lwale phawu lephupha:
1 Uphawu lwephupha «umtshato»: eyona maphupha aqhelekileyo malunga nesimboli
1.1 Abantu abatshatileyo: uphuphe ngabani?
1.1.1 Iphupha lomlingane-nantsi ingcaciso!
1.1.2 Indoda iyafa ephupheni ... kude kube sekufeni
1.1.3 Umfazi kuhlalutyo lwamaphupha.
1.1.4 Isibini esitshatileyo - hay, heyi, hee ndibona ntoni ephupheni lam?
1.1.5 Ukutshata nomntu ongamaziyo - kutheni ndiphupha ngayo?
1.1.6 Umtshato ne ex? Iphupha elingaqhelekanga
1.2 Uthando kangakanani Isindululo somtshato ephupheni.
1.3 Umsitho womtshato. Konke malunga nomtshato
1.3.1 Imvume yomtshato-ihlala ifuneka emaphupheni
1.3.2 Amalungiselelo omtshato kwihlabathi lamaphupha-masihambe!
1.3.3 Umtshato wenzeka ephupheni.
1.4 Jonga umsesane womtshato emaphupheni
1.5 Yiyo leyo: xa umtshato wephupha uqhekeka
1.5.1 Iphupha lokukrexeza
1.5.2 Ukwahlukana komtshato: iphupha elibi okanye usindiso?
2 Uphawu lwephupha «umtshato» - ukutolikwa ngokubanzi
3 Uphawu lwephupha «umtshato» - ukutolikwa kwengqondo
4 Uphawu lwephupha «umtshato» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «umtshato»: eyona maphupha aqhelekileyo malunga nesimboli
Abantu abatshatileyo: uphuphe ngabani?
Iphupha lomlingane-nantsi ingcaciso!
Ephupheni ngomyeni, ngakumbi iimvakalelo zidlala indima. Ukuba ezi bezintle, ngokuqinisekileyo oku kubhengeza ukuvumelana kwi el mundo ngokwenene. Ukuba iimvakalelo ezingakhiyo bezinokudlala indima, oku kungakhokelela kwiingxaki emtshatweni. Ukhe walala nendoda? Emva kwakhe, phakathi kwezinye izinto, ukufuna ukusondela kungabonakaliswa.
Indoda iyafa ephupheni ... kude kube sekufeni
Ukuba umyeni ubhubhile kwihlabathi lamaphupha, oku akufuneki kuthathwe njenge-omen ye ukufa wokwenene wendoda ethandwayo. Endaweni yoko, yinkqubo yophuhliso notshintsho enokuthi ngamanye amaxesha ikhokelele ekusonjululweni kweengxaki kunye nobunzima emtshatweni.
Umfazi kuhlalutyo lwamaphupha.
Ngokwenkcazo ngokubanzi yamaphupha, umfazi usephupheni ngendlela engumfuziselo ngenxa yolindelo oluthile kunye neminqweno anayo umntu ophuphayo. Mhlawumbi loo mntu okanye loo mntu uziva elangazelela kakhulu ngokunxulumene nento kwaye uyayidibanisa kwihlabathi lamaphupha kunye nomfanekiso womfazi.
Isibini esitshatileyo - hay, heyi, hee ndibona ntoni ephupheni lam?
Ukutolikwa kwesibini esitshatileyo kunokwahluka kakhulu kuxhomekeke kwisiganeko esithile sephupha kunye nemeko yobuqu. Ukuba ubona isibini esitshatileyo ephupheni njengesibini esihambelanayo sabathandi, kunokwenzeka ukuba uzive ulilolo. Ukuba usebudlelwaneni, iphupha elo lingabonisa iingxaki eziza kuvela kungekudala.
Ukutshata nomntu ongamaziyo - kutheni ndiphupha ngayo?
Ukhe waphupha ngokutshata umntu ongamaziyo? Ukuba kunjalo, kuya kufuneka uvuleleke kuphuhliso olutsha ebomini bakho, ngakumbi xa ukwindlela enqumlayo. Iphupha elinokubonisa ukungoneliseki ngokubhekisele kwimicimbi yesondo kubudlelwane. Ngaba mhlawumbi ikhona iminqweno eyimfihlo yesini kunye nemibono?
Umtshato ne ex? Iphupha elingaqhelekanga
Kubo bonke abantu abaphupha ngokutshata nomntu wakhe wakudala, eli phupha limcela ukuba akhumbule izinto zangaphambili kwaye angazilibali ngaphandle kwenqanaba elitsha lobomi. Owayesakuba ngumyeni okanye umfazi wangaphambili ubonakalisa amava amabi kunye namabi, kodwa zonke zibalulekile kwikamva labo. Ulwazi kunye neenkumbulo zangaphambili kunokuba luncedo olubalulekileyo ekwenzeni izigqibo.
Uthando kangakanani Isindululo somtshato ephupheni.
Ukuba kukho iphupha malunga nesicelo somtshato, inokuchazwa ngokufanelekileyo nangokubi. Kwicala elifanelekileyo, oku kubonisa ukukulungela ukutshintsha kunye nokwazi ukuthatha uxanduva. Nangona kunjalo, ngokwembono engalunganga, kunokubakho uloyiko olufihliweyo lokuphulukana nokulala.
Umsitho womtshato. Konke malunga nomtshato
Imvume yomtshato-ihlala ifuneka emaphupheni
Nokuba kunenkululeko yomtshato ngoku, kunokwenzeka ukuba iphupha elo linento yokwenza nomtshato okanye iphepha-mvume lomtshato ngelixa ulele. Imeko enjalo yamaphupha kufuneka ibonise umphuphi ukuba ufuna inkxaso yabanye abantu yokuphumeza iprojekthi kwaye ke ngaloo ndlela bafumane ulonwabo kunye nolwaneliseko.
Amalungiselelo omtshato kwihlabathi lamaphupha-masihambe!
Ukuba siphupha ngamalungiselelo omtshato, oku ngokubanzi kufanekisela ulindelo lwento kwihlabathi elivukayo. Sisenokuba silindele iminqweno ethile ukuba izalisekiswe kwikamva. Ukuba amalungiselelo omtshato ephupheni ahamba kakuhle kwaye kakuhle, kusenokwenzeka ukuba amaphupha ethu azaliseke.
Umtshato wenzeka ephupheni.
Kuxhomekeke kwindima yomntu oleleyo ephupheni, umsitho womtshato okanye umsitho womtshato unokuchazwa ngokwahlukileyo. Ukuba wayebandakanyeka njengentombi okanye isithandwa sakhe, oku kubonisa ulonwabo kunye nempumelelo. Ukuthatha inxaxheba kumsitho njengendwendwe kubonisa kuphela iiprojekthi ezintsha ezinokukhawuleziswa.
Jonga umsesane womtshato emaphupheni
Emva kwendandatho yomtshato ephupheni kukho ubudlelwane phakathi kwabantu ukuba umntu ufuna okanye esele ikho. Iringi nayo imele infinito. Ukuba umntu ulahlekelwe yiringi yomtshato emaphupheni, oku kungangumfuziselo kubhekiswa kukwahlukana okuzayo.
Yiyo leyo: xa umtshato wephupha uqhekeka
Ukukrexeza luphawu oluntsonkothileyo lwamaphupha. Ingabonisa isazela esinetyala, kunye nokubhengeza ukusilela kwaye uzibonakalise kulowo uleleyo njengephupha elibi okanye i-chimera. Ukuba iqabane liyakhohlisa ephupheni, kunokubakho uloyiko lwelahleko ngokunxulumene neqabane ngokwalo.
Ukwahlukana komtshato: iphupha elibi okanye usindiso?
Amaxesha ngamaxesha, umtshato noqhawulo-mtshato awukude kakhulu kude nasephupheni. Ukuba umntu uphupha ngokuqhawulwa komtshato, kwelinye icala isalathiso sobomi bokwenene kunokwenzeka. Kwelinye icala, iphupha likwalumkisa ngokubeka emngciphekweni umanyano lwakho. Kananjalo, icebo lokungqubana kwangaphakathi kunokubonwa kumnyhadala wephupha kunye neqabane langaphambili.
Uphawu lwephupha «umtshato» - ukutolikwa ngokubanzi
Ukutshata ephupheni ikakhulu ngumqondiso wekamva elinoxolo kunye nolonwabo ekuchazeni amaphupha. Isimboli yephupha ikwalatha kwi Ukuzinikela eli ziko. Rhoqo amaxesha, abantu abakw ubudlelwane obuzinzileyo baphupha ngokutshata. Ngokuqinisekileyo ukuphupha kuthwala ingcinga yokwenyani ngoku ephupheni kude kube sekupheleni.
Ukuba umntu otshate naye ephupheni uyamangalisa, oku kuyindlela yokubonisa ngokuchazwa kwephupha. u lonwabo kunye nokunqwenela unxibelelwano oluqinileyo. Isimboli yamaphupha ingabonisa ukungoneliseki ngokwesondo kubudlelwane obukhoyo bothando.
Ukutolikwa okuthandwayo kwamaphupha, iqabane ephupheni yinto ebalulekileyo yokucacisa iphupha. Ukuba ngumntu ongathandekiyo, uphawu lwephupha "umtshato" ulumkisa ngenkqubo ecekisekayo kunye neemeko ezimbi. Ukuba umntu uphupha umfazi, uxela impumelelo.
Iphupha lomfazi wendoda lithembisa ngokulungileyo nya mekela kwilixa elizayo. Ukuba umntu utshata umhlolo okanye umhlolo, iphupha kufuneka lilindele iingxaki.
Umanyano lomtshato olonwabisayo luphawu lwephupha lokufumana imali kunye nempumelelo yeshishini. Uqhawulo-mtshato, phakathi kwezinye izinto, lubonisa ukunyelisa ekuchazeni amaphupha. Ukuqhawuka komtshato ephupheni kulumkisa ngokubuza ngokunzulu ukuba izenzo zomntu zilonakalisa kangakanani iphupha. Ukuba uzibona ungatshatanga kwakhona emva kokuba utshatile, oku kungabonisa ubunzima bokwenyani kubudlelwane bakho.
Uphawu lwephupha «umtshato» - ukutolikwa kwengqondo
Kwinqanaba leengqondo, uphawu lwephupha "umtshato" ekuchazeni iphupha libonisa i-nostalgia ukukhangela ubudlelwane obunothando obunokwakha ikamva labo. Ngapha koko, le isenokuba ngumnqweno-mnqweno, kodwa ukuphupha ngobomi bokwenene kukwinkqubo yokungena kubudlelwane obuqinileyo.
Ukuba umntu uziva ukuba iphupha alilunganga, kuba umyeni uziphatha ephupheni, umzekelo, njenge-pasha, uphawu lwephupha linye. isilumkiso. I-subconscious yenza ukuba umntu ophuphayo azi ukuba unamathandabuzo ngayo. Emva kokuchazwa kwephupha, umntu ophuphayo kufuneka abuze ukuba ukulungele na ukutshata.
Nabani na ophupha ngobuhlobo obukhoyo bomtshato useluxolweni nesiqu sakhe ngokwenkcazo yengqondo yephupha elo. Umtshato luphawu lwephupha kubo. Unión chasa iindawo ezibalulekileyo apho iphupha liphumelela okanye sele liphumelele. Ukuba umtshato uyasilela ephupheni, olu luphawu olunokwenzeka lokuphazamiseka kwengqondo.
Umtshato oveliswe sisibophelelo ngamanye amaxesha luphawu lweembono ezingafunekiyo ekutolikeni amaphupha, apho kungcono ukuwaphula. Ukusweleka kweqabane kubonisa ingcinezelo kwaye Ukufuduswa Iindawo ezizezakho zobuntu bephupha Umfuziselo wephupha "umtshato" ulumkisa kule meko yokonakala kwempilo yengqondo.
Uphawu lwephupha «umtshato» - ukutolika kokomoya
Umtshato ngumanyano phakathi kwabantu ababini, ikakhulu phakathi kwendoda nomfazi. Ke ngoko, uphawu lwephupha ekuchazeni amaphupha okomoya kuthetha ogqwesileyo noxolelwaniso lwezichasi.
Ephupheni, ibhalansi phakathi kwamabhinqa kunye namandla obudoda, umzimba nomphefumlo, kunye nengqondo neemvakalelo, kubuyiselwa kwisiseko somnqophiso womtshato.